Madaxweynaha Somalia oo Tacsi ka Diray Geeridda Danjirihii Somalia ee Masar – Radio Daljir
Nofeembar 23, 2015 1:50 b 0
Somalia, November 23, 2015-(Daljir)-Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi diray shacabka ,qoyska iyo eheladii uu ka geeriyooday Marxuum Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo ahaa Danjirihii Soomaaliya u fadhiyey dalka Masar.
“Innaa Lillaahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto marxuumka. Waxaa uu ka mid ahaa tiirarkii aasaaska u ahaa diblomaasiyadda Soomaaliya. Waxaa khibraddiisa u dheereyd dadaal gaar ah oo u ugu adeegayey qaranka muddadii burburka aan ku jirney”.
Madaxweynaha ayaa marxuumka Ilaahay uga baryey inuu naxariistii jannadii fardowsa ka waraabiyo, qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodayna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Isnin_23